Imiphumela emibi ye-Ativan nokusebenzisana, nokuthi ungakugwema kanjani - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Izindaba Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Cindezela Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Imiphumela emibi ye-Ativan nokusebenzisana, nokuthi ungakugwema kanjani
Imiphumela emibi ye-Ativan nokusebenzisana, nokuthi ungakugwema kanjani
Uma unayo ukukhathazeka , mhlawumbe uke wezwa I-Ativan . Noma kunjalo, ungahle ungazi ukuthi i-Ativan iyasiza futhi nokuqwasha, ingavimbela isicanucanu ngesikhathi sokwelashwa ngamakhemikhali, futhi isetshenziselwa ukwelapha ukuquleka kwesifo sokuwa. I-Ativan, igama lomuthi wemithi i-lorazepam, ngumuthi osebenza ngokushesha, iningi labantu liqala ukuzwa imiphumela yalo yokwehlisa phakathi kwemizuzu engama-20 nengama-30 ngemuva kokuyiphuza. Njengemithi eminingi, i-Ativan inemiphumela engemihle futhi ingaxhumana nezinye izidakamizwa. Kule ndatshana, sixoxa ngemiphumela engemihle ye-Ativan, ukuxhumana kwezidakamizwa, kanye nezexwayiso zokuyisebenzisa ngokuphepha.
I-Ativan (lorazepam) usesigabeni semithi ebizwa nge-benzodiazepines. Itholakala njengomuthi kadokotela. Kuvunyelwe e-U.S. Ngezindlela zokwelapha ezilandelayo:
Ukukhululeka kwesikhashana kwezimpawu ezivela ezinkingeni zokukhathazeka nokudangala okuhambisana nokukhathazeka
Ukuphathwa kwezinkinga zokukhathazeka
Odokotela kwesinye isikhathi bayayinikeza off-ilebula , okusho ukuthi yize kungagunyaziwe ukwelapha isimo esithile sezokwelapha, ubufakazi be-anecdotal butholile busiza. Ngokusho kwe- Isikhungo Sikazwelonke Semininingwane Ye-Biotechnology , le mibandela ifaka phakathi:
Isifo sokuhoxiswa kotshwala ne-delirium
Ukuvimbela isicanucanu ngesikhathi sokwelashwa komdlavuza
Ukuphumula nokuthambisa ngaphambi kwe-anesthesia
Ukusetshenziswa kwesikhashana kokuqwasha
Isimo sokuhlaselwa yisifo sokuwa
I-Ativan isebenza ngokushesha. Lapho uthatha ngomlomo, iningi labantu liqala ukuzwa imiphumela ngemizuzu engama-20 kuye kwengama-30. I-Ativan isebenza kungakapheli umzuzu owodwa kuya kwemithathu lapho inikezwa ngemithambo yegazi.
kanjani ukuqeda ukutheleleka kwezindlebe
OKUSHIWO: Izindlela zokwelashwa nokukhathazeka
Kungani i-lorazepam iyinto elawulwayo?
Kukhona ingozi yokuhlukunyezwa nokuncika kwe-Ativan. I-the united states Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa (i-FDA) ubhale i-Ativan njengoHlelo IV into elawulwayo . Kunamazinga amahlanu ezinto ezilawulwayo ezisuselwa engcupheni yezidakamizwa yokuhlukunyezwa noma ukulinyazwa, njengokuthi umuthi unamandla okuholela ekuthembekeni ngokwengqondo noma ngokomzimba. ISheduli I inamandla aphakeme kakhulu okusebenzisa kabi izidakamizwa, njenge-heroin. Le mithi ayinakho ukusetshenziswa okwamukelwe kwezokwelapha futhi ayikho emthethweni e-United States. Shejula V izidakamizwa zinamandla aphansi okuhlukumeza, njengeziraphu ezithile zokukhwehlela eziqukethe i-codeine. AmaBenzodiazepines afana ne-Ativan akuSheduli IV, okusho ukuthi anamandla alinganiselwe okusebenzisa kabi izidakamizwa, kanye nokusetshenziswa kwezempilo okusemthethweni. Eminye imithi kulesi sigaba ifaka iXanax (alprazolam), iKlonopin (clonazepam), neValium (diazepam).
Ingabe i-Ativan iyisidakamizwa?
Yize kuyinto elawulwayo, i-Ativan ayiyona into yokuluthisa. Ama-narcotic anciphisa umbono womuntu ngobuhlungu, kuyilapho i-benzodiazepines inemiphumela yokuzola. Kokubili ama-narcotic kanye ne-benzodiazepines anamandla okwenza umkhuba. Yize odokotela bebheka i-Ativan iphephile futhi isebenza kahle uma isetshenziswa njengokuyalelwa, ukuthembela emzimbeni kungakhula ngokushesha okungamasonto amabili, ngokusho INational Alliance on Mental Illness (NAMI) .
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-Ativan
Imiphumela emibi ye-Ativan ivame ukuba nzima kakhulu ngemithamo ephakeme. Eminye yemiphumela emibi kakhulu ifaka phakathi:
Ukozela noma ukulala
Ukwehla kwekhono lokugxila
Ukwehla kwengcindezi yegazi kungumphumela oseceleni we-Ativan, kepha akunqunyelwe ukwehlisa umfutho wegazi, kuchaza Amanda Brown , NP, udokotela ongumhlengikazi wezempilo yengqondo esibhedlela saseNew York-Presbyterian futhi osebenza eColumbia University Irving Medical Center.
I-Ativan nayo ingadala ukuphazamiseka kokulala, ukungasebenzi kahle kwe-erectile, nezinguquko kokudla.
I-Ativan isebenza ngokuthulisa uhlelo lwezinzwa ukuze lubhalansise umsebenzi ebuchosheni, ikhuthaze umphumela ophumuzayo nopholile. Iphinde iphakamise i-dopamine, futhi lapho ithathwa ngemithamo ephezulu, ama-neurotransmitter azizwa kahle ebuchosheni ayanda, abangela umuzwa ojabulisayo, okungenye yezizathu zokuba umlutha.
Imiphumela emibi ye-Ativan
Abanye abantu bangathola okuningi imiphumela emibi kakhulu kusuka ekusetshenzisweni kwe-Ativan. Lokhu kufaka phakathi:
Ukushova ukuhamba ngezinyawo
Ukuthuthumela noma ukungakwazi ukuhlala phansi
Ukuqhuma kwesikhumba noma isifuba
Ukuphuzi kwesikhumba noma kwamehlo
Ukulahleka kwememori noma izinkinga zememori
Ukulala nokuphefumula noma ukuwohloka kokuphefumula kokulala
Isikhathi esiningi, imiphumela emibi iyancipha njengoba umphumela wemithi uncipha, imvamisa emahoreni ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili. Kodwa-ke, uma uhlangabezana nemiphumela emibi emibi noma imiphumela ayipheli emahoreni ambalwa, kufanele ufune usizo lwezempilo.
Imiphumela emibi yokugunyazwa kokumisa umuthi ifaka ukulala ngokweqile, ukulahleka kwememori, ukucasuka, ukusebenzisana kahle, kanye nesiyezi, kusho uBrown. Ngoba ukumisa ngokuzumayo i-Ativan kungadala izimpawu zokuhoxa, kufanele ukhulume nodokotela wakho ngaphambi kokukuyeka.
I-Ativan imithi yesikhashana. Lapho kunqunyelwe ukusetshenziswa kwansuku zonke, inkambo yokwelashwa enconywayo ingamasonto amane noma ngaphansi.
Izimpawu zokuhoxa kwe-Ativan
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kungaholela ekuthembekeni nasekubekezeleleni, okusho ukuthi umuntu angadinga umthamo ophakeme ukuze abe nomphumela ofanayo noma angathola ukuhoxiswa ngokungawuthathi umuthi, kusho UWendi D. Jones , Pharm.D., Usokhemisi eNyakatho Carolina. Ngokwengqondo, kungaba nzima kakhulu ukuhamba ngaphandle kwesidakamizwa, okuholele ekukhuleni okukhulayo. Ukuyeka imithi ngemuva kwamasonto ambalwa okusetshenziswa akufanele kudale izinkinga ezinkulu. Kodwa-ke, uma usebenzise umuthi isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili kuya kwamane, ukuncika kungenzeka, futhi ukukunciphisa kungadingeka.
Kwabanye abantu, i-Ativan ingakhuphula izimpawu zokucindezeleka. I-Ativan iyisistimu yezinzwa ephakathi ecindezelayo. Uma yakhela ohlelweni lwakho noma uma uyithatha ngemithamo ephezulu, kungenzeka ukuthi ukucindezeleka kube kubi kakhulu futhi kuholele nasemicabangweni yokuzibulala noma imizwa. Imininingwane yezidakamizwa ichazwe kufayela le- ukufaka iphakheji ikhombisa ukuthi i-Ativan kufanele isetshenziswe kuphela ezigulini ezinesifo sokudangala lapho isiguli sikwelashwa okucindezelayo.
I-Ativan ivuliwe Uhlu Lwemithi Yobhiya yezidakamizwa okungenzeka azifanele abantu abadala asebekhulile.Abantu abadala asebekhulile bazise ukuzwela kuma-benzodiazepines. Kulezi ziguli, kunengozi eyengeziwe yokukhubazeka kwengqondo, i-delirium, ukuwa, ukuphuka, nokuphazamiseka kwezimoto lapho kusetshenziswa i-Ativan. Yize ekhona ohlwini lwamaBhiya, i-Ativan ijwayele ukunikezwa abantu abadala. Kulezi ziguli, kufanele kusetshenziswe umthamo ophansi kunawo wonke futhi isiguli kufanele sibhekwe ngeso elibukhali.
Ngoba i-lorazepam iyisidambisi, akufanele ushayele imoto noma usebenzise imishini uze wazi ukuthi lo muthi ukuthinta kanjani.
Kukhona nemininingwane ephikisanayo yokuthi ngabe i-Ativan ibangela noma iyingozi yini ekukhubazekeni kwememori noma isifo se-Alzheimer's. Ucwaningo olulodwa ithole ukuthi ama-benzodiazepines angaba yingcuphe yokuwohloka komqondo. Futhi enye isifundo, eshicilelwe ngo-2014 , uthole ukuhlangana phakathi kokuthatha i-lorazepam kanye nengozi yesifo i-Alzheimer's. Kodwa-ke, kwakamuva kakhulu ucwaningo , eshicilelwe ngo-2016, ikhombisile ukuthi ubungozi bokuwohloka komqondo babuphakeme nje kancane kubantu abathatha imithamo ephansi ye-benzodiazepines, futhi yayingekho kulabo abayithatha ngemithamo ephezulu.
I-Benzodiazepines ingadala ukucindezeleka kokuphefumula, noma i-hypoventilation, lapho isetshenziswa yodwa, futhi nangaphezulu uma ihlanganiswa nolunye uhlobo olucindezelayo lwesistimu yezinzwa (CNS). Lesi sifo sokuphefumula sibangela ukuphefumula okuhamba kancane, okungasebenzi, ukudala izinga eliphakeme le-carbon dioxide nezinga eliphansi le-oxygen emzimbeni wakho.
I-Benzodiazepines efana ne-Ativan nayo ingadala ingcindezi yokuphefumula uma ihlanganiswa neminye imishanguzo yokuthambisa noma izinto ezifana notshwala, izidambisi zemisipha, ama-antihistamine wokuthambisa, ama-antipsychotic, ama-anticonvulsants, kanye ne-anti-depressants. Njalo thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuze uqiniseke ukuthi i-Ativan iphephile ngokuhlanganiswa neminye imithi oyiphuzayo.
kuthatha isikhathi esingakanani i-colace ukusebenza
Uma kunjalo ukhulelwe noma uhlela ukukhulelwa , funa usizo lwezokwelapha ngaphambi kokuthatha lo muthi. Izifundo zezilwane zikhombise ukungajwayelekile kwesinye isikhathi kumbungu. Kukhona ingozi eyengeziwe yokukhubazeka okuvela ku-tranquilizers phakathi ne-trimester yokuqala. Ukusetshenziswa kwe-Ativan phakathi ne-trimester yesithathu nakho kuhlotshaniswa nengozi eyengeziwe yokuhoxa kwe-neonatal. ILorazepam ingadlulisela ezinganeni ngobisi lwebele futhi ingadala ukuthamba nokucasuka enganeni. Uma uncelisa, thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Utshwala nama-opioid kufanele kugwenywe lapho uthatha i-Ativan, kusho uDkt. Jones, Ngokuvamile, noma yini ekwenza uzizwe ukhathele, kufaka phakathi uwoyela we-CBD ne-melatonin, idinga ukuthathwa ngokucophelela uze wazi ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani. Kunemithi eminingana engakhuphula imiphumela emibi noma enobuthi ye-lorazepam. Kuhle ngaso sonke isikhathi ukubuza usokhemisi wakho ukuthi kukhona okuthile okuphephile ongakuthola, kufaka phakathi incwadi kadokotela, i-counter-counter, nemithi yamakhambi.
Ngaphambi kokuthatha i-Ativan, noma yimuphi umuthi, kufanele utshele udokotela wakho ngayo yonke imithi — incwadi kadokotela noma ekhawunteni, izithasiselo, namavithamini — owaphuzayo ikakhulukazi:
Imithi ye-asthma: i-theophylline
Imithi ye-Gout: i-probenecid
Imithi yesifo sikaParkinson: Rytary, Sinemet, noStalevo (levodopa)
Imithi yezinhlungu ze-opioid
Izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo (amaphilisi okulawula ukubeletha)
Izidakamizwa, izidakamizwa, noma amaphilisi okulala
Ukuhlela imithi yokungezwani komzimba / ama-antihistamine
Imithi yezinhlungu noma imithi yokukhwehlela equkethe i-codeine
Uma uthatha noma iyiphi yale mithi, udokotela wakho angahle afune ukulungisa isilinganiso sakho, ashintshele komunye umuthi, noma akuqaphele eduze ngemiphumela emibi kanye nokusabela okungahambi kahle.
Akufanele udle izithelo zomvini noma umkhiqizo wamagilebhisi ngenkathi uthatha lo muthi ngoba lokhu kungakhuphula imiphumela kuholele kubuthi noma ukusabela okungalungile.
Akufanele uphuze utshwala ngenkathi ubuthatha njengoba ungathola imiphumela emibi esongela impilo.
Yize zingekho izixwayiso ezithile mayelana nokuphuza ikhofi noma okunye ukudla neziphuzo eziqukethe i-caffeine, kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-caffeine iyisikhuthazi futhi ingaphikisana nemiphumela ye-lorazepam.
Ungayigwema kanjani imiphumela emibi ye-Ativan
Imiphumela emibi, njengokukhathala, imvamisa iqala ngemuva nje kokuthatha umuthi, imvamisa kungakapheli imizuzu engama-30 uthatha umuthi.Ngokuvamile ziyancipha njengoba imiphumela yomuthi incipha, ngokuvamile phakathi kwamahora ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili ngemuva kokuyithatha. Abanye abantu baphinde babone ukuthi imiphumela emibi iyancipha njengoba beqhubeka nokuthatha umuthi, futhi umzimba wabo uzivumelanisa nawo, ngokwesibonelo, kungenzeka bangazizwa bekhathele ngemuva kokuwuthatha njalo izinsuku eziningana noma amasonto.
1. Thatha i-Ativan ngokwemiyalo kadokotela wakho.
Ukuthatha isilinganiso esifanele se-Ativankusiza ukunciphisa imiphumela emibi ongayithola. Abanye abantu bazithatha njengoba zidingeka, okusho ukuthi ngezikhathi ezithile uzizwa ukhathazekile, kanti abanye bazithatha ngezikhathi ezithile usuku lonke ukugcina izimpawu zokukhathazeka zikhona. Uma unemiphumela engemihle, khuluma nodokotela wakho mayelana nokuthi ukushintsha isikhathi ophuza ngaso imithi kungakunciphisa yini ukungakhululeki kwakho.
I-Ativan itholakala ngezinhlobo ezahlukene kanye nemithamo:
Umjovo we-Intramuscular: 2 mg / ml, 4 mg / ml
Ngomjovo: 2 mg / ml, 4 mg / ml
Ithebhulethi yomlomo: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
Kufanele uqale ngomthamo ophansi futhi usebenze kancane ukhuphuke, uqinisekise ukuthi uthatha umthamo ophansi kakhulu okunikeza inzuzo kuwe. I- I-Prescriber's Digital Reference (PDR) iphakamisa imithamo elandelayo yokukhathazeka:
Isilinganiso se-Ativan sokukhathazeka ngeminyaka
Ukuqala isilinganiso somlomo Umthamo omkhulu womlomo
Izingane ezineminyaka engu-11 ubudala Kunqunywa ngeminyaka yengane, isisindo, nomlando wezempilo.
Intsha eneminyaka eyi-12 + I-2-3 mg ngosuku ihlukaniswe ngamanani ama-2-3 usuku lonke; ingakhula kancane kancane lapho kudingeka futhi ibekezelelwe Kuze kufike ku-10 mg ngosuku njengoba kudingeka, kwehlukaniswe ngemithamo eminingana (isilinganiso esiphezulu esidingekayo yi-6 mg / ngosuku ngemithamo ehlukanisiwe)
Abantu abadala I-2-3 mg ngosuku ihlukaniswe ngamanani ama-2-3 usuku lonke; ingakhula kancane kancane lapho kudingeka futhi ibekezelelwe Kuze kufike ku-10 mg ngosuku, kwehlukaniswe ngemithamo eminingana (isilinganiso esiphezulu esidingekayo yi-6 mg / ngosuku ngemithamo ehlukanisiwe)
Abantu abadala be-Geriatric 1-2 mg ngosuku ihlukaniswe ngamanani ama-2-3 usuku lonke; ingakhula kancane kancane lapho kudingeka futhi ibekezelelwe Kuze kufike ku-6 mg ngosuku (2 mg ngosuku ezakhiweni zokunakekelwa zesikhathi eside). Kukhona ingozi eyandayo yobuthi kulesi sizwe, ngakho-ke, ukunyuka okuncane, okuhamba kancane kuhamba phambili.
Ngokuqwasha, isilinganiso somuntu omdala esinconywayo siqala ku-2 mg ngesikhathi sokulala, ukuthi sikhuliswe sibe ngu-4 mg, uma kudingeka, ngenqubo yokwelashwa izinyanga ezine noma ngaphansi.
2. Thatha i-Ativan ngokudla.
Iningi labantu alibuzwa ubuhlungu besisu noma ukucasuka lapho lithatha i-Ativan; noma kunjalo, uma wenza kanjalo,kungasiza ukuyithatha nokudla.
3. Ungayeki ngokungazelelwe ukuthatha i-Ativan.
Izimpawu zokuhoxa ku-Ativan zingakhathazeki kakhulu kunemiphumela emibi.Akufanele uyeke ukuthatha umuthi ngokungazelelwe, ikakhulukazi uma uwuphuza njalo.Izimpawu zokuhoxa zibandakanya ukukhathazeka okuphindayo, ukungahlaliseki, ukuthuthumela, ukujuluka, ukukhathazeka, ukuqwasha, kanye nokuhlaselwa. Lezi zimpawu ziqala kungakapheli usuku olulodwa noma ezimbili ngemuva komthamo wakho wokugcina futhi zingahlala izinsuku eziyisikhombisa noma ngaphezulu, kuya ngokuthi usuthathe isikhathi esingakanani. Kungcono ukuthepha ukuthi uyithatha kancane kangakanani futhi kangaki.
Udokotela wakho uzosebenza nawe ukusetha uhlelo lokuphepha oluphephile. I- UMnyango Wezempilo WaseSan Mateo County iphakamisa izindlela ezimbili zokuthwebula:
Ukwehliswa kwama-25% womthamo wokuqala njalo emavikini amabili, noma
Ukwehlisa umthamo ngo-25% ngesonto lokuqala, ama-25% ngesonto lesibili, bese kuba ngu-10% isonto ngalinye uze uyeke umuthi
Inqubo yokuthwebula ingathatha amasonto ambalwa kuya ezinyangeni ezimbalwa ukumisa ngokuphelele umuthi. Ukwenza ngale ndlela kususa noma kunciphise ngokuphawulekayo noma yiziphi izimpawu zokuhoxa ohlangabezana nazo.
4. Buza udokotela wakho ngokushintshela emithini ehlukile.
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angase asikiseleukuzama eminye imithi yokukhathazeka esikhundleni se-Ativan. Abanye imishanguzo kunganciphisa izimpawu zokukhathazeka. Lokhu kufaka phakathi:
I-Paxil , I-Paxil CR , Pexeva , UBrisdelle (paroxetine)
I-Effexor XR (venlafaxine)
Kukhona namanye ama-benzodiazepines, afaka:
Wonke umuntu usabela emithini ehlukile. Okusebenza kangcono komunye umuntu kungahle kungasebenzi komunye. Kungcono ukusebenzisana eduze nodokotela wakho futhi ufunde ngazo zonke izinketho zokwelashwa kwakho ukuze uthole umuthi okusebenzela kangcono kakhulu.
Kunjani ukuhlala nokukhathazeka
Izibalo zokulala 2021
ngaphezulu komuthi wokuphikisa wezinhlungu zemisipha
yini amazinga kashukela aphezulu ayingozi
ngazi kanjani ukuthi anginakho ukubekezelelana ngobisi
ibiza malini i-lisinopril kwa-walmart
ungathatha kokubili i-singulair ne-benadryl
kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-zpack isebenzele ukutheleleka nge-sinus